Doorashooyinka baarlamaanka Djibouti - BBC Somali - Warar
Doorashooyinka baarlamaanka Djibouti
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 21 Febraayo, 2013, 13:11 GMT 16:11 SGA
Doorashada Jabuuti waxa ay dhacaysaa berri oo Jimca ah
Doorashada baarllamaanka jamhuuriyadda jabuti ee Jimcaha 22.2.2013 waxaa ku tartamaya saddex isbahaysi xisbi.
Waa UNP oo loo yaqaanno isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada jamhuuriyadda jabuti oo uu hogaamiyo Madaxweyne ismaaciil cumar geelle , USN oo loo yaqaanno isbahaysiga midawga mucaaridka oo uu hogaamiyo siyaasiga mucaaridka ah ee dhowaan dibedda ka soo laabtay Daahir Axmed Faarax DAAF , iyo xisbiga CDU oo isaga dhowaan la aasaasau uuna hogaamiyo siyaasiga mucaaridka ah cumar cilmi kheyrre.
Kuraasta baarllamaanka dalka jabuuti ee loo tartamayaa waa 65 kursi oo 35 ka mid ahi laga soo dooranaayo caasimadda magaalada jabuuti , 30ka kalena gobollada kale ee cali sabiix , carta , dikhil iyo obokh . waa haatan la soo gebogabeeyay ololihii doorashada oo weriyaha bbc ee ka soo waramaya doorshadaasi Axmed saciid cige uu ku tilmaamay mid xamaasad iyo loollan adagi ka muuqdo.
gudoomiyaha gudiga doorashada jamhuuriyadda jabuuti Cabdi ismaaciil xirsi ayaa BBC u sheegay wax waliba caadi u socdaan.
Wuxuu sheegay inay jogaan jabuuti goob joogayaal doorashadan korka ka eegayay oo ka kala socda ururada midawga afrika , jaamicadda carabta , ururka dalalka islaamka iyo urur goboleedka bariga afrika ee IGAD .